३० श्रावण २०७८, शनिबार २०:४०
मकवानपुर, ३० साउन । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट ८ का लागि छैटौँ दोहोरी भिडन्त यही शनिबार हुँदैछ । छैटौँ दोहोरी भिडन्तमा प्रदिप रोका र कल्पना दाहालसँग मिना नेपाल र राजेन्द्र पाठकले दोहोरी भिड्दैछन् । यी दुबै टिमले यसअघिको दोहोरी भिडन्तका क्रममा दर्शक र निर्णायकहरुबाट प्रशंसा पाएका थिए । शनिबार उनीहरुको प्रस्तुति पश्चात निर्णायकहरुले दिएको अंकबाट ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत दर्शक भोटको आधारमा अर्को शनिबार रिजल्ट हुनेछ । यी दुबै जोडीहरु गायक गायिकाकै रुपमा चिनिएका र लाईभ दोहोरीमा दर्शकहरुको मन जित्न सफल जोडीहरु हुन् । चर्चाको शिखरमा रहेका यी दुबै टिम दर्शकमाझ निक्कै लोकप्रिय छन् । दुबै टिम बलियो भएकोले एकअर्कालाई पछि पार्न यो जोडीहरुले दमदार दोहोरी भिडन्त गर्नेछन् । यी दुई जोडीको यो कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला त ? आखिर को जानेछ उत्कृष्ट ८ मा ? तपाईको विचारमा यी दुई जोडीमध्ये कुन जोडीको जित्ने सम्भावना बलियो छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका तेह्रौँ जोडी हुन् मिना नेपाल र राजेन्द्र पाठक । उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत उत्कृष्ट १६ मा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत छानिएका पहिलो जोडी हुन् । यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५९९ अंक प्राप्त गर्दै ५ अंकले हार व्यहोरेका थिए । तर उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत पून शोमा प्रवेश गरेका हुन् । फिजिकल अडिसनदेखि नै चर्चामा रहेका मिना र राजेन्द्र लाईभ दोहोरीमा चर्चित छन् । उनीहरु चिनिएका गायक तथा गायिका पनि हुन् । मिना ओखलढुङ्गाकी र राजेन्द्र नुवाकोटका हुन् ।
त्यस्तै दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका दोस्रो जोडी हुन् कल्पना दाहाल र प्रदिप रोका । यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्त अन्तर्गत कल्पना र प्रदिपको जोडीले बिक्रमबाबु विश्वकर्मा र लक्ष्मी बस्नेतको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनीहरुले उत्कृष्ट २४ को भिडन्तका क्रममा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ६१२.५ अंक प्राप्त गर्दै ५.५ अंकले जित हासिल गरेका थिए । कल्पना र प्रदिप चर्चित गायक गायिका समेत हुन् । उनीहरु दुबै जना लाईभ दोहोरीमा पनि चर्चित छन् । उनीहरु दुबै जना सिन्धुपाल्चोक निवासी हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–